पानासोनिकका ४ नयाँ स्मार्टफोन बजारमा, २ बजेट तथा २ मिड रेन्जका स्मार्टफोन - Technology Khabar
» पानासोनिकका ४ नयाँ स्मार्टफोन बजारमा, २ बजेट तथा २ मिड रेन्जका स्मार्टफोन
पानासोनिकका ४ नयाँ स्मार्टफोन बजारमा, २ बजेट तथा २ मिड रेन्जका स्मार्टफोन
Technology Khabar ७ असार २०७३, मंगलवार
काठमाडौं, ७ असार । नेपालका लागि पानासोनिक मोबाइल फोनको एकमात्र आधिकारिक विक्रेता एलाईड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनल प्रा. लि. ले पानासोनिकका नयाँ मोबाइलहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले पानासोनिक मार्क, पानासोनिक आर्क, पानासोनिक टि ४४ तथा पानासोनिक टि ५० स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको हो । यसमध्ये मार्क र आर्क मिडरेन्जका स्मार्टफोन हुन भने टि ४४ र टि ५० बजेट तहका स्मार्टफोन हुन् ।
एलाईड ट्रेड लिङ्कका प्रबन्ध निर्देशक मनिष राजभण्डारीले एस.एल.सी. परीक्षा दिएका परीक्षार्थीहरूका लागि यी बजेट स्मार्टफोनहरू आकर्षक र मूल्यमा सुलभ लाग्ने बताए ।
यी फोनहरुको विशेषता यस्ता छन् ।
पानासोनिक टि ४४ (Panasonic T44)
यो स्मार्टफोनमा ४ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ भने यसमा १ जीबीको र्याम तथा ८ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज राखिएको छ । पानासोनिक टि ४४ मा फ्ल्याससहित ५ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा तथा २ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट फेसिंग क्यामरा राखिएको छ । यसमा क्वाड कोर प्रोसेसर रहेको छ भने एन्ड्रोइड ६.० मार्समेलो अपरेटिंग सिस्टममा संचालन हुन्छ ।
स्यामपेन गोल्ड तथा इलेक्ट्रिक ब्लु रङमा बजारमा उपलब्ध यो स्मार्टफोनमा २४०० एमएएचको ब्याट्री प्याक राखिएको छ । यो फोनको मूल्य रु ६ हजार ९ सय ९० तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पानासोनिक टि ५० (Panasonic T50)
पानासोनिकको यो बजेट स्मार्टफोनमा ४.५ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ भने क्वाड कोर प्रोसेसरद्धारा संचालन हुन्छ । यसमा १ जीबीको र्याम तथा ८ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ । फोटोका लागि फ्ल्याससहितको ५ मेगापिक्सेल रियर क्यामरा तथा २ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ ।
एन्ड्रोइड ५.१ ललिपपमा आधारित यो फोनमा १६०० एमएएचको ब्याट्री रहेको छ । स्यामपेन गोल्ड तथा डार्क ब्लु रङमा उपलब्ध यो फोनको मूल्य रू. ८४९० रहेको छ ।
पानासोनिक आर्क (Panasonic Arc)
यसमा ४.७ इन्चको एचडी डिस्प्ले राखिएको छ भने क्वाड कोर क्वालकम स्न्यापड्रयागन प्रोसेसर रहेको छ । २ जीबीको र्याम तथा १६ जीबीको स्टोरेज भएको यो स्मार्टफोनमा ८ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा तथा ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ । यसमा १८०० एमएएचको ब्याट्री छ भने बजारमा यसको मूल्य रु १९,९९० तोकिएको छ । यो फोन एन्ड्रोइड ५.१ ललिपप अपरेटिंग सिस्टममा संचालन हुन्छ ।
पानासोनिक मार्क (Panasonic Mark)
पानासोनिकले हाल ल्याएका विभिन्न ४ फोनहरुमध्ये यो मिड रेन्जको फोन हो । यो फोनमा ५.५ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ भने यसमा १.५ गीगाहर्जको अक्टा कोर क्वालकम स्न्यापड्रयागन प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ ।
पानासोनिक मार्क स्मार्टफोनमा २ जीबी र्याम तथा १६ जीबीको स्टोरेज छ भने १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा तथा ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ । यसमा फींगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ ।
एन्ड्रोयडको ललिपपमा आधारित यो फोनमा क्विक चार्जसहितको २५०० एमएएचको ब्याट्री छ । यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा रु २१,९९० मा खरिद गर्न सकिनेछ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७३, मंगलवार
मन्त्री बाँस्कोटाले भने- दर्ता नगरी सामाजिक संजाल संचालन गरे बन्द गर्नुपर्छ
अमेरिकी ह्वाइट हाउसको नयाँ वेबसाइटको सोर्स कोडमा राखियो यस्तो गोप्य संदेश
भीभो नेपालले स्मार्टफोनको वारेन्टी अवधि थप गर्यो, नयाँ प्रडक्ट लन्च नगरिने
गूगलले प्ले स्टोरका लागि राखिने एप रिभ्युलाई ७ दिन भन्दा धेरै समय लिने